…ပိုက်ဆံမရှိဘူးလို့ ပါးစပ်က အမြဲပြောနေသူတွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါပြီ. – Askstyle
…ပိုက်ဆံမရှိဘူးလို့ ပါးစပ်က အမြဲပြောနေသူတွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါပြီ.
ပိုက်ဆံမရှိဘူးလို့ ပါးစပ်က အမြဲပြောနေရင် တနေ့တခြား ကြပ်တည်းလာတာ ပိုသိသာလာတယ် ။
အဆင်မပြေဘူးလို့ ခနခနတွေးနေရင် ပိုပြီး အဆင်မပြေ ဖြစ်လာတယ်။ ဒါ အယူအဆမဟုတ်ဘူး။ဘာသာရေး အတွေးမဟုတ်ဖူး Psycho သဘောပဲ… ။
ကြားရဖန်များရင် အတွေးတွေဖြစ်လာတယ်။ပြောပါများရင် အာ့အတိုင်းယုံကြည်လာတယ်။ ကြာတော့ ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲက အတိုင်း ကိုယ့်နှုတ်ထွက်စကားတွေအတိုင်း ကိုယ့်ဘဝက ပြောင်းသွားတယ် ။
ဒါ့ကြောင့် အမြဲတမ်း အကောင်းဘက်ကတွေးပါ။ အကောင်းဘက်ကို တွေးပါ။အောင်မြင်သူလိုတွေးပါ။ အောင်မြင်သူတွေနား ချဉ်းကပ်ပါ လို့ ပြောကြတာပေါ့ ။
လဲကျတာဟာ ပြဿနာ မဟုတ်ဖူးလေ ပြန်မထချင်တော့တာ or ငါ ပြန်မထ နိုင်လောက်ပါဘူးလို့တွေးတာ…
လက်လျှော့လိုက်တော့မယ်ဆိုတာကသာ ပြသနာကြီးပါ… မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာထက် ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဘဲ တွေးဖို့ပိုလိုတာပါ… ။
လူတိုင်းမှာ ခက်ခဲတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေရှိတယ်။ဖြေရှင်းပုံပေါ်မူတည်ပြီး လူတွေရဲ့ ဘဝ အခြေအနေတွေ ကွာသွားတာပါ… ။
သင့်ကို ဆင်းရဲစေမယ့် အချက် (၇) ချက် ဒီအချက်တွေကိုပြင်နိုင်ရင် သင် ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲတော့ဘူး
( ၁ ) မစဉ်းစားပဲသုံးတယ်
ဒီနေ့ ကိုယ့်ရဲ့ ပိုက်ဆံသုံးနည်းက နောက် ( ၁၀ ) နှစ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ငွေရေးကြေးရေးကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်“လိုအပ်တာ” နဲ့ “လိုချင်တာ” ကိုမခွဲခြားနိုင်ဘူးဆိုရင် မလိုအပ်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ စပြီးဖြစ်စေပါတယ် ဒီတော့ ဒီအချက်ပဲ ကိုယ့်ဘဝ ရဲ့ ငွေရေးကြေးရေး ပြသာနာကိုဖြစ်စေပါတယ်
( ၂ ) ဘဝ ကို အကြွေးရှိအောင်လုပ်ခြင်း
သင် အကြွေးများလာအောင်လုပ်တိုင်းမှာ သင်က ငွေရေးကြေးရေးအဆင့်အတန်းကို တဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကျအောင် စုတ်ယူနေတာပါပဲ / credit အကြွေး / ကဒ်တစ်ခုခုအကြွေး / အပြင်က အကြွေး / အရစ်ကျပေးချေခြင်းအကြွေး / စသဖြင့်ဒီအကြွေးတွေ တည်ဆောက်ခြင်းဟာ အမြဲတမ်းထွက်ငွေလမ်းကြောင်းသစ်တွေကိုတည်ဆောက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ / ဒီတော့ ဒီအချက်တွေ က သင့်ရဲ့ရေရှည် ငွေရေးပိုင်းကို အကျိုးတက်ရောက်မှုများစွာပေးနိုင်မှာပါ ။
( ၃ ) ငွေရေးကြေးရေးအပိုင်း အသေးစိတ် မထိန်းသိမ်းခြင်း
ဝင်ငွေထွက်ငွေ စာရင်းမလုပ်ခြင်း / အကြွေးဆပ်ရမယ့်ရက်အတိအကျမလုပ်ခြင်း / ငွေရေးကြေးရေးအပိုင်းမှာ ကိုယ့်အကျိုးကိုမသိခြင်း/ ငွေရေးကြေးရေးစာရွက်စာတမ်းတွေကို စနှစ်တကျမထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း / ဒီလို မျိုး အကြောင်းအရာသေးသေးလေးကပဲ လူအများစုရဲ့ ဘတကို ငွေရေးကြေးရေးပြသာနာရှိအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ် / ဒါကြောင့် ဒီလိုအရာတွေကိုယ့်ဘဝထဲ ဝင်မနှောင့်ယှက်အောင် ကိုယ့်ရဲ့ ငွေရေးကြေးရေးကို စနှစ်တကျထိန်းသိမ်းပါ ။
( ၄ ) အပိုငွေ – အလိုငွေ တွေကို ဘယ်တော့မှ plan မချခြင်း
ငွေရေးကြေးရေး plan မချခြင်း / အနာဂတ် သုံးရမယ့်ငွေကိုကြိုတင်မစဉ်းစားတာက ကိုယ့်ဘဝမှာ အရေးပေါ် ကိစ္စ တွေကိုအမြဲတမ်းကြုံစေပါတယ် / ငွေရေးကြေးရေးပိုင်းမှာ ဒီအရင်း ( ၃ ) ခု –
( ၁ ) ဝင်ငွေ – ထွက်ငွေအရင်း
( ၃ ) ငွေရေးကြေးရေး စာရင်းဇယားအရင်း တွေကိုကိုယ့်မှာရှိတယ်ဆိုရင် (သိတယ်ဆိုရင်) ဘဝကို ဒီထက်ပိုလွယ်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ် ။
( ၅ ) စုငွေကို အထင်သေးခြင်း
စုငွေရဲ့ အ ဓိ က အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းရင်းက ငွေရေးကြေးရေးဝီရိယပါပဲ / ဒါကြောင့် ငွေကြေးအရေအတွက် သေးသေးလေးကို အထင်သေးခြင်းနဲ့ စုငွေကို နောက်ရက်တွေဆီ တွန်းထုတ်တဲ့သူက သူ့ဘဝ အနာဂတ်ငွေရေးကြေးရေးအောင်မြင်မှု ကိုမရောက်နိုင်တဲ့ရက်ဆီ တွန်းထုတ်တာနဲ့တူတူပါပဲ
ပန်းတိုင်မရှိတဲ့ဘဝက သံလိုက်အိမ်မြောင်မရှိတဲ့ သင်္ဘောနဲ့တူတူပါပဲ / ဘဝအစိပ်အပိုင်းတိုင်းမှာ ငွေကြေးအထိန်းအချုပ်လေးနဲ့ ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းလေးတွေရှိသင့်ပါတယ် / ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ငွေရေးကြေးရေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ပန်းတိုင်အရင်ရှိရပါမယ်
( ၇ )ငွေရေးကြေးရေးပိုင်း ဗဟုသုတတွေကို အလေးမပေးဘူး
ငွေက ငွေရေးကြေးရေးပြသာနာကို ဘယ်တော့မှမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး / ဒါပေမဲ့ ငွေရေးကြေးရေးပြသာနာပဲ ပြသာနာကို ဖြေရှင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ် / ဒါကြောင့် ငွေရေးကြေးရေးပိုင်းမှာ တိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင် ငွေရေကြေးရေးပိုင်းဗဟုသုတကို ရှာဖွေပါ (ဝင်ငွေရှာပါ / ငွေဝင် ငွေထွက်ကို control လုပ်ပါ / ငွေစုပါ / ပြီးရင် အရင်းအနှီးလုပ်ပါ ) … ဒီနေ့ကနေစပါ
Credit – justpractice
ပိုကျဆံမရှိဘူးလို့ ပါးစပျက အမွဲပွောနရေငျ တနတေ့ခွား ကွပျတညျးလာတာ ပိုသိသာလာတယျ ။
အဆငျမပွဘေူးလို့ ခနခနတှေးနရေငျ ပိုပွီး အဆငျမပွေ ဖွဈလာတယျ။ ဒါ အယူအဆမဟုတျဘူး။ဘာသာရေး အတှေးမဟုတျဖူး Psycho သဘောပဲ… ။
ကွားရဖနျမြားရငျ အတှေးတှဖွေဈလာတယျ။ပွောပါမြားရငျ အာ့အတိုငျးယုံကွညျလာတယျ။ ကွာတော့ ကိုယျ့စိတျကူးထဲက အတိုငျး ကိုယျ့နှုတျထှကျစကားတှအေတိုငျး ကိုယျ့ဘဝက ပွောငျးသှားတယျ ။
ဒါ့ကွောငျ့ အမွဲတမျး အကောငျးဘကျကတှေးပါ။ အကောငျးဘကျကို တှေးပါ။အောငျမွငျသူလိုတှေးပါ။ အောငျမွငျသူတှနေား ခဉျြးကပျပါ လို့ ပွောကွတာပေါ့ ။
လကျလြှော့လိုကျတော့မယျဆိုတာကသာ ပွသနာကွီးပါ… မဖွဈနိုငျဘူးဆိုတာထကျ ဖွဈအောငျဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတာကိုဘဲ တှေးဖို့ပိုလိုတာပါ… ။
လူတိုငျးမှာ ခကျခဲတဲ့ အခိုကျအတနျ့တှရှေိတယျ။ဖွရှေငျးပုံပျေါမူတညျပွီး လူတှရေဲ့ ဘဝ အခွအေနတှေေ ကှာသှားတာပါ… ။
( ၁ ) မစဉျးစားပဲသုံးတယျ
ဒီနေ့ ကိုယျ့ရဲ့ ပိုကျဆံသုံးနညျးက နောကျ ( ၁၀ ) နှဈမှာ ကိုယျ့ရဲ့အနာဂတျငှရေေးကွေးရေးကို ထိနျးခြုပျထားတဲ့ အရာတဈခုပဲဖွဈပါတယျ“လိုအပျတာ” နဲ့ “လိုခငျြတာ” ကိုမခှဲခွားနိုငျဘူးဆိုရငျ မလိုအပျတဲ့ အသုံးအနှုနျးတှေ စပွီးဖွဈစပေါတယျ ဒီတော့ ဒီအခကျြပဲ ကိုယျ့ဘဝ ရဲ့ ငှရေေးကွေးရေး ပွသာနာကိုဖွဈစပေါတယျ
( ၂ ) ဘဝ ကို အကွှေးရှိအောငျလုပျခွငျး
သငျ အကွှေးမြားလာအောငျလုပျတိုငျးမှာ သငျက ငှရေေးကွေးရေးအဆငျ့အတနျးကို တဖွညျးဖွညျးနှိမျ့ကအြောငျ စုတျယူနတောပါပဲ / credit အကွှေး / ကဒျတဈခုခုအကွှေး / အပွငျက အကွှေး / အရဈကပြေးခခြွေငျးအကွှေး / စသဖွငျ့ဒီအကွှေးတှေ တညျဆောကျခွငျးဟာ အမွဲတမျးထှကျငှလေမျးကွောငျးသဈတှကေိုတညျဆောကျတာနဲ့ အတူတူပါပဲ / ဒီတော့ ဒီအခကျြတှေ က သငျ့ရဲ့ရရှေညျ ငှရေေးပိုငျးကို အကြိုးတကျရောကျမှုမြားစှာပေးနိုငျမှာပါ ။
( ၃ ) ငှရေေးကွေးရေးအပိုငျး အသေးစိတျ မထိနျးသိမျးခွငျး
ဝငျငှထှေကျငှေ စာရငျးမလုပျခွငျး / အကွှေးဆပျရမယျ့ရကျအတိအကမြလုပျခွငျး / ငှရေေးကွေးရေးအပိုငျးမှာ ကိုယျ့အကြိုးကိုမသိခွငျး/ ငှရေေးကွေးရေးစာရှကျစာတမျးတှကေို စနှဈတကမြထိနျးသိမျးနိုငျခွငျး / ဒီလို မြိုး အကွောငျးအရာသေးသေးလေးကပဲ လူအမြားစုရဲ့ ဘတကို ငှရေေးကွေးရေးပွသာနာရှိအောငျလုပျနိုငျပါတယျ / ဒါကွောငျ့ ဒီလိုအရာတှကေိုယျ့ဘဝထဲ ဝငျမနှောငျ့ယှကျအောငျ ကိုယျ့ရဲ့ ငှရေေးကွေးရေးကို စနှဈတကထြိနျးသိမျးပါ ။
( ၄ ) အပိုငှေ – အလိုငှေ တှကေို ဘယျတော့မှ plan မခခြွငျး
ငှရေေးကွေးရေး plan မခခြွငျး / အနာဂတျ သုံးရမယျ့ငှကေိုကွိုတငျမစဉျးစားတာက ကိုယျ့ဘဝမှာ အရေးပျေါ ကိစ်စ တှကေိုအမွဲတမျးကွုံစပေါတယျ / ငှရေေးကွေးရေးပိုငျးမှာ ဒီအရငျး ( ၃ ) ခု –
( ၁ ) ဝငျငှေ – ထှကျငှအေရငျး
( ၃ ) ငှရေေးကွေးရေး စာရငျးဇယားအရငျး တှကေိုကိုယျ့မှာရှိတယျဆိုရငျ (သိတယျဆိုရငျ) ဘဝကို ဒီထကျပိုလှယျအောငျလုပျနိုငျပါတယျ ။
( ၅ ) စုငှကေို အထငျသေးခွငျး
( ၇ )ငှရေေးကွေးရေးပိုငျး ဗဟုသုတတှကေို အလေးမပေးဘူး